Mon, Jul 6, 2020 at 6:21pm
काठमाडौँ, १८ जेठ सभामुख कृष्णबहादुर महराले हरेक गतिविधि सञ्चालनमा संविधानको मर्मअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पन्न हुनसक्ने विमतिलाई पनि सोही अनुरुप हल गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को अन्तरवस्तुबारे आज राजधानीमा आयोजित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । जनसङ्ख्या..
भारतमा विदेशमन्त्री परिवर्तनले नेपाल-भारत सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने प्रचण्डको दाबी
विराटनगर, १८ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकीकरण इमान्दारीका साथ कार्यन्वयन गरिने बताउनुभएको छ । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले पार्टी एकताका समयमा भएको समझदारीलाई अनावश्यक उचाल्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले पार्टीलाई एक ढिक्का र सुदृढ बनाउने कार्यमा दुबै अध्यक्ष लागिरहेकाले नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र जनतामा अनावश्यक रुपमा विभाजित नहुन आग्रह..
फिदिम, १८ जेठ । गत जेठ ६ गते पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका– ३ आरुबोटेमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा भागेर बाँच्न सफल भएकी बालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिएको छ । मन्त्री आङ्बोका अनुसार सीताकी आमासहित उनको परिवारका सदस्यसँगको सहमतिमा सीताको पठन–पाठन र भरणपोषणको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिएको हो । उक्त घटनामा भागेर बाँचेकी १२ वर्षीया सीता खजुम लिम्बूको पठन–पाठन र भरणपोषणको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिएको..
सरकारलाई लिएर नेकपामा गुटबन्दी, कुन नेता कता ?
काठमाडौँ, १८ जेठ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै सरकार आलोपालोको सहमतिमा सम्झाएपछि नेकपामा नयाँ तरंग फैलिएको छ। प्रतिवादमा अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेश फर्किनुअघि भारतको दिल्लीमै दाहालमाथि व्यंग्य कसे, ‘सरकार वर्ष दिन किन ? अब ५, ६ दिन मात्र चल्छ।’ उनले दाहालसँग भएको सहमति कहीं कतै गोप्य नरहेको पनि उल्लेख गरेको समाचार अन्नपूर्णपोष्टमा छ । उता, वरिष्ठ..
रिसइबी साँध्ने हतियार बन्यो सामाजिक सञ्जाल, यस्ता छन् प्रतिनिधि घटना
काठमाडौँ, १८ जेठ । काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने २३ वर्षीया कल्पना (नाम परिवर्तन)को विवाह भएको १५ दिन मात्रै भयो । उनलाई फेसबुकबाट धेरैले शुभकामना दिए । तर, एक युवाले कल्पनासँग खिचेको फोटो राखेर कमेन्ट गरे । त्यसमै केहीले ‘अर्काको गलफ्रेन्ड चोरेर विवाह गर्ने’ भन्दै प्रतिक्रिया जनाए । ती युवती र उनका पतिले उक्त घटना सहन सकेनन् ।..
लोकसेवाको विज्ञापनले केन्द्र–प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व
काठमाडौँ, १८ जेठ । लोकसेवा आयोगले देशैभरका स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनलाई लिएर प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रदेश २ ले लोकसेवाले लागेको भर्ना प्रक्रिया संविधानविपरीत भनेको छ। आयोगले बुधबार देशैभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ पदमा भर्ना खोलेको छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेको बहाना देखाएर केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको समाचार कान्तिपुरले छापेको..
काठमाडौँ, १८ जेठ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा बिहीबार एक परिचित, तर गैर–राजनीतिक अनुहार देखा परे । धेरै आश्चर्यचकित हुने गरी पूर्वविदेशसचिव डा. सुब्रमण्यम जयशंकरले १४औँ वरीयताको मन्त्रीको शपथ लिए । जयशंकरले चाहेको कुरा लागू हुने होइन, प्रधानमन्त्री मोदीले चाहेको नीति जयशंकरले कार्यान्वयन गर्ने हो, आधारभूत रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कोही आउँदा वा जाँदा प्रभावित हुँदैन । शुक्रबार जयशंकरलाई विदेशमन्त्री तोकिएपछि..
मोदीको सपथ कार्यक्रममा सहभागीभई फर्किए प्रधानमन्त्री ओली, पत्रकारसँग भेटघाट गरेनन्
काठमाडौ, १७ जेठ । बिहीबार नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही बेरअघि काठमाडौं आइपुगेका छन् । ओलीलाई स्वागत गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलसहितका उच्च सरकारी अधिकारी पुगेका थिए । मोदीले दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएर ५८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिसकेका छन्। दिल्लीमा रहँदा ओलीले शुक्रबार दिउँसो करिब आधा घण्टा समकक्षी मोदीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले मोदीलाई..
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अर्बौं रकम डुबाएका निर्माण व्यवसायीले तत्काल भुक्तानी नपाउने
काठमाडौँ, १७ वैशाख मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले तत्काल पीडित निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ। सीएमसी कम्पनीबाट पीडित निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो डुबेको अर्बौं रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले तत्काल भुक्तानी गर्न नसकिने जानकारी दिएको हो। समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले शुक्रबार काठमाडौंका पीडित पक्षसँगको अन्तर्क्रियामा कानुनी बाटो नभएका कारण तत्काल सो भुक्तानी दिन सकिने..
भैरहवा, १७ जेठ । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले अब कम्युनिस्ट र कांग्रेसले राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार भैरहवामा आयोजित प्रदेश स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रलाई सम्बोधन गर्नुपूर्व पार्टीले गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘मुलुकमा दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार भएपनि जनतालाई केही दिन सकेन’, उनले भने, ‘यसैकारणले हाम्रो पार्टी संघीयता, सुशासन, सम्बृद्धि र समाजवादलाई लिएर वैकल्पिक शक्तिको रुपमा..
काठमाडौँ, १७ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा शुक्रबार अपराह्न भएको भेटवार्तामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले जनस्तरको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नाका साथै आपसी हित र चासोका विविध विषयमा विचार–विमर्श गर्नुभएको भारतको बाह्य मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताउनु भएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री..
‘आलोपालो सरकार’बारे प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ - एक वर्ष हैन ४/५ दिनमात्र बाँकी छ
नयाँदिल्ली, १७ जेठ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आलोपालो सरकार चलाउने विषय उठान गरेपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिल्लीबाटै जवाफ दिएका छन् । बिहीबार नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले आलोपालो सरकार चलाउने पसरानै सहमति भएको प्रष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक गरेको 'आलोपालो सरकार चलाउने’ सहमति पुरानै कुरा भएको..
पहिलो पुस्ताका उद्यमी प्रभाकर राणाको न्युयोर्कमा निधन, दाहसंस्कार नेपालमै गरिने
काठमाडौँ, १७ जेठ । एक वर्षदेखि न्युयाेर्कमा उपचार गर्ने क्रममा बिहिबार राणाको निधन भएको पारिवारिक स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् । प्रभाकर शमशेर राणाको उपचारका क्रममा बिहिबार अमेरिकाको न्युयाेर्कमा निधन भएको छ। राणाको शव नेपाल ल्याएर संभवतः शनिबार पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम दाहसंस्कार गर्ने कार्यक्रम छ। ८४ वर्षीय राणा ढाडको विरामी थिए र त्यसको सल्यक्रिया गर्ने क्रममा अस्पतालको हलेचेक्र्याइँले गर्दा झन् थला परेका थिए। एक वर्षदेखि..
काठमाडौँ, १७ जेठ पछिल्लो समय नेपालमा १५ देखि १९ वर्ष समूहका किशोरकिशोरी सुर्तीजन्य पदार्थ विशेषगरी धूमपानको बढी सेवनकर्ता रहेको देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कूल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत मानिस सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्दछन् । यसको ५० प्रतिशत त पुरुष रहेका छन् । तीमध्ये १५ देखि १९ वर्ष समूहका किशोरकिशोरी धूमपान गर्दछन् । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले निम्त्याउने रोगका कारण बर्सेेनि..
काठमाडौँ, १७ जेठ । पश्चिमी वायुको प्रभावले देरभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पूर्वी र मध्य भागका केही स्थान तथा पश्चिमी पहाडी भेगका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना देखिएको छ । बाँकी भू–भागको मौसम भने सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । प्रि–मनसुन भएकाले लगातार झरी नहुने र तुलनात्मक पूर्व र मध्य क्षेत्रका पहाडी भूभागमा बढी वर्षा..
यौनशक्ति बढाउने नाममा अढाइ वर्षीय समिरकुमारको हत्या गरेको खुलासा
काठमाडौँ, १७ जेठ । आफूमा भएको दैवी शक्ति बढाउने नाममा नरबली दिने धनुषाको मिथिला नगरपालिका ६ ढल्केबरका शत्रुधन महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यौनशक्ति कम हुदै गएपछि महतोले दैबी शक्ति र यौनशक्ति बढाउने नाममा छिमेकी शम्भु साहको अढाइ वर्षीय छोरा समिरकुमार साहको हत्या गरेको खुलासा भएको छ । गत बैशाख २४ गते महतोले आर्यनको हसियाले रेटेर बली दिएको २ नम्वर प्रदेश प्रहरी..
नेकपा एकीकरण नसकिँदै सत्ता विवाद
काठमाडौँ, १७ जेठ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने क्रममा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको तथ्य बाहिर आएसँगै उनीहरूबीच भित्रभित्रै विवाद रहेको देखिएको छ। उतिबेलाको लिखित सहमति बाहिर नआए पनि पार्टी र सरकार सञ्चालनमा ओली हावी हुँदै गएपछि त्यो बाहिर आएको हो। सिके राउतसँग भएको सहमति पनि अध्यक्ष दाहाललाई हस्ताक्षरपछि..
Results 9755: You are at page 148 of 326